Ngokuba ukulungiswa ezihlukahlukene izitsha zonke ungathanda ukuba othile unyaka wonke, futhi ngendlela Ubuningi obanele of utamatisi fresh of high, kodwa ukufaneleka kwethu izimo zezulu balawule imithetho. Ngakho-ke, le Sebawoti anakekele amashumi eminyaka kwenziwa utamatisi unama.
Naphezu kweqiniso lokuthi libhekisela ugxilisa okusemathinini, izinga layo kuphezulu kakhulu. Nakuba esikhathini senqubo yokukhiqiza utamatisi kanye baphathwa ezithile ukushisa, umkhiqizo namanje iqukethe amavithamini B1, PP, A, C, B2 kanye no-E, kukhona macronutrients (sodium, magnesium, i-calcium, potassium, phosphorus) kanye ukulandelela izakhi (yensimbi, nickel, ayibe). Utamatisi unamathisele inamaprotheni, ama-carbohydrate, mono- futhi disaccharides, acid organic, ukudla okuqinile. Calorie umkhiqizo - 102 kcal / 100 g
Utamatisi unamathisele - umkhiqizo owenziwe kusuka utamatisi fresh. Ngo inqubo ekuwulungiseleleni utamatisi ophoqelelwe ngokusebenzisa ngesihlungo akhethekile kwaze kwaba ngu iyunifomu (eyohlobo) mass ke bagxila by abilayo izigubhu ezikhethekile. Utamatisi unamathisele iqukethe isitashi kanye Umbala (E124). Sodium chloride uvunyelwe akukho kuka 1.5%.
Utamatisi unamathisele has a ukudla okuqinile lokuhlushwa mkhulu kunezinhliziyo utamatisi puree. Ngakho, e-unamathisele ziqukethe 20-40%, futhi okhamiwe wahlanganiswa amazambane - 12-20%. Utamatisi unamathisele esetshenziswa ukulungiselela amasobho (isobho, isobho kharcho), nososo for izitsha kanye pizza, isoso nesiphuzo kabusha.
Kunezindlela eziningana abakhiqizi yalesi uhlobo lomkhiqizo, kodwa omunye ethandwa kakhulu eRussia unama utamatisi "Pomidorka". Sici Its main kuyinto kontsentatsiya ukudla okuqinile okusezingeni eliphezulu (25%). Kukholakala ukuthi abaningi balaba izinto umkhiqizo, aba maningi lokuhlushwa feedstock (utamatisi).
Ngokuvamile abakhiqizi abonakele ukunciphisa okuqukethwe ngezinto zemvelo eluhlaza ngokwengeza a isitashi umkhiqizo ezishibhile bhunga ukuvumelana oyifunayo. Kanjeyana they kakhulu ukunciphisa izindleko zokukhiqiza. Utamatisi unamathisele lokuhweba "Pomidorka" iqukethe akukho izithasiselo yokufakelwa kanye udayi.
Namuhla kukhona okuningi ayo ehlukile, ezinye obhekisela "alulame" isigaba. Utamatisi juice, okuyinto ingenye ethandwa kakhulu, futhi abazange ukubaleka kule ukudalelwa. Kuphela ingxenye encane it is eyenziwe zokupheka zakudala by ukulondolozwa ngokushesha juice fresh futhi thermally kusetshenzwe. Ezimweni eziningi, abathengi ukuthenga isiphuzo ukuthi oluqanjwe diluting utamatisi ekhethekile ugxilisa ngamanzi. Zokunambitha nokuhogela komkhiqizo ihlukile juice yemvelo, kanye nengoma yayo.
Lokhu juice ayiqukethe amanzi, futhi lakhiwa ngamanzi etholwe. Utamatisi unamathisele akuyona njengomuntu ocebile izakhi kanye has a izinguquko ezimbalwa ukunambitheka nombala njengoba kuqhathaniswa ijusi fresh. Ngokuvamile walulama iziphuzo walungisa kusuka imikhiqizo uthenge e-Iran Turkey. I ugxilisa uzilungiselele ukugaya, sieving futhi utamatisi ukubila kuze unama. ugxilisa ezinjalo buhlanjululwe ngamanzi, wanezela kubo usawoti, ushukela kanye isitashi. I mkhiqizo ke homogenized (okulungiselelwe ingxube eyohlobo), ukuthi inzalo futhi ligcwaliswe emaphaketheni ehlukene. Le ndlela yokukhipha juice ishibhile kuka the classic, kodwa izinga umkhiqizo ezifana lingaphansi kunalokhu ukuthi emvelo.
Utamatisi umpe utamatisi unama kungenziwa ngokuzikhethela kuphekwe ekhaya, esakaza amanzi omuhle pasta futhi ushukela ukunambitha nosawoti. On ulwanga, kuyoba ukuhluka ijusi yokukhuluma ngqo, kodwa lingaphuzwa ngaphandle kokwesaba empilweni yazo.
Isaladi IsiShayina (iklabishi Chinese):-kilojoule amaningi nemifino enempilo
Indlela ukulungiselela inhlama kuhle ophaya ku umenzi isinkwa
Indlela ubilise amaqanda e smyatku?
"Tsiprovet" imithi - iso lehla amakati nezinja
Khan Giray: Biography. lwamakhosi Giray